Zodiac July 5 - roscodị Horoscope zuru ezu - Akara Zodiac
Isi Akara Zodiac 5 July Zodiac bụ Ọrịa Cancer - Fulldị Omume zuru ezu
5 July Zodiac bụ Ọrịa Cancer - Fulldị Omume zuru ezu
Akara zodiac maka July 5 bụ Ọrịa Cancer.
Akara Astrological: Crab. Ihe akara nke Nshịkọ na-anọchi anya ndị a mụrụ na June 21 - July 22, mgbe Sun na Sun na Cancer. Ọ na-egosi ịhụnanya maka nkwụsi ike, nghọta, ịdị obi na nlezianya.
Ihe Ọrịa cancer na kpakpando na-enwu gbaa bụ Cancri na-agbasa na ogo 506 sq n'etiti Gemini na West na Leo na East. Igwe latitude ya a na-ahụ anya bụ + 90 Celsius na -60 Celsius, nke a bụ naanị otu n'ime kpakpando iri na abụọ nke zodiac.
akara zodiac maka June 2
Aha cancer bụ aha Latin maka Crab. Na Greek, Karkinos bụ aha akara maka akara zodiac nke July 5. Na Spanish na French ọ na - eji Ọrịa Cancer.
Ihe omuma ndi ozo: Capricorn. Nke a na-egosi ịnụ ọkụ n'obi na mmụọ ma na-egosi otu esi eche na ndị obodo Capricorn ga-anọchi anya ma nwee ihe niile Ọrịa Cancer na-egosi ndị mmadụ chọrọ.
mgbe nwa agbogho di nno na anya
Usoro: Cardinal. Na-ekpughe otu esi nwee obi ike na ezi uche na ndụ nke ndị amụrụ na July 5 na otu ha si nwee ezi obi.
Ulinglọ ụlọ: Fourthlọ nke anọ . Nke a bụ oghere nke gburugburu ebe obibi, nchekwa ụlọ na nna ochie. Nke a bụ ihe mere ndị Canceri ji mara na itinye uche na echiche dị ka nke ụlọ, ihe ndị a hụrụ n'anya na nchekwa onwe onye.
Isi na-achị: Ọnwa . A na-ekwu na ahụ nke eluigwe a na-emetụta oge na usoro. A na-akpọ Ọnwa Selene ma ọ bụ Atemis, chi nwanyị ịchụ nta sitere n'akụkọ ifo ndị Gris. Ọnwa na-egosikwa n'echiche na ndụ ndị amaala obodo a.
Mmewere: Mmiri . Nke a bụ ihe nnọchiteanya maka ndị amụrụ n'okpuru ọnwa 5 nke zodiac nke na-echetakwa ihe mgbagwoju anya na ikike ha ikpughe mmetụta ha n'okpuru ọnọdụ dị iche iche.
akụkụ gbara ọchịchịrị nke pisces nwanyi
Bọchị obi ụtọ: Mọnde . Bọchị a dị n’okpuru ọchịchị nke Ọnwa ma na-egosipụta mmegharị na passivity. Ọ na-achọpụta na ọdịdị okike nke ụmụ amaala Ọrịa.
Nọmba ihu ọma: 1, 9, 13, 14, 22.
Okwu: 'Ọ na-adị m!'
Ozi ndi ozo na July 5 Zodiac n'okpuru ▼
Mmekọrịta Taurus na Gemini Enyi
Eprel 23 ụbọchị ọmụmụ
ihe bu February 11th zodiac sign
Kedu ihe bụ akara zodiac maka Jenụwarị 20
nwanyị aries na aquarius nwoke ndakọrịta
Eprel 12 zodiac ịrịba ama ndakọrịta
Septemba 22 zodiac ịrịba ama ndakọrịta
esi eme ka nwoke libra
scorpio na gemini mmekọahụ ndakọrịta